UK: 13 dhalinyaro Soomaali ah oo lagu helay kufsi ay u geysteen gabdho yaryar – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 28 November 2014 28 November 2014
Mareeg.com: Maxkamad ku taala Bristol dalka Britain ayaa 13 dhalinyaro Soomaali ah ku heshay dambi ah in ay gabdhaha caruurta ah ee iskuulada taga da’dooduna u dhaxayso 13-17 ay kufsan jireen.
Koox dhalinyaro ah oo tiradoodu gaareyso 13 ayaa maxkamad ku taal dalka Ingiriiska waxaa ay ku heshay dambiyo ah kufsi, ka ganaciga jirka gabdhaha iyo isticmaalka muqaadaraad.
Dhalinyaradan ayaa la sheegay in ay falal kufsi ah kula kaceen afar gabdhood oo mid ka mid ah ay ka soo jeeday dadka midabkoodu barxan yahay halka saddexda kalana ay ahaayeen gabdho caddaan ah.
Gabdhahan ayaa da’adoodu u dhexeysay 13 jir illaa iyo 17 jir. Waxaana gabdhahan la sheegay in falalka kufsiga ah lagula kacay hotel ku yaal magaalada Bristol.
Dhalinyaradan Soomalida ah ayaa maxkamada Bristol Crown Court ay dhagaysatay dacwadooda labo jeer oo kala gaar ah. Waxaana siddeed ka mid ah dhalinyaradan lagu xukumay xabsi u dhexeeya 18 bilood illaa iyo 13 sano.
Toddobada kale ayaa shalay waxa la dhegeystay dacwadooda iyadoo la filayo in berri lagu dhowaaqo xukunkooda.
Dhalinyaradan oo magacyadooda lagu soo daabacay wargeysyada dalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ah Said Zakaria oo 22 jir ah, Mustapha Farah oo 20 jir ah, Liban Abdi oo 21jir ah, Arafat Osman 20 jir, Idleh Osman 21jir, Mustafa Deria 22 jir, Abdulahi Aden 20 jir, Mohamed Jama 23jir, Mohamed Jumale, 24 jir, Mohamed Dahir 22 jir, Jusuf Abdizirak, 20, Omar Jumale 20 jir iyo Abdirashid Abdulahi, 21 ah.
Maxkamadda, ayaa loo sheegay in gabdhaha qaar laga dhaadhiciyay in dhaqanka Soomaalida uu ka mid yahay in ragga ay gabdhaha kala beddeshaan.
Bulshada Soomaaliya ee ku nool dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada Bristol ayaa aad uga xumaaday falka lagu soo eedeeyay dhalinyaradan Soomaaliyeed, waxaana qoraal ay soo saareen ururada bulshada magaalada Bristol ay sheegeen in aysan ahayn dhaqanka Soomaalida waxa lagu eedeeyay dhalinyaradan.